विराटनगरमा यात्रुले नभई अटो रिक्साले खोज्छन् यात्रु ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
विराटनगरमा यात्रुले नभई अटो रिक्साले खोज्छन् यात्रु ! (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Aug 24, 2019
विराटनगर । यात्रुले नभई सिटी रिक्साले यात्रु खोज्नु पर्छ विराटनगरमा । देशको दोसो ठूलो शहरको उपमा पाएको विराटनगरमा वेथिति बग्रेल्ती बढ्दै गएको एउटा नमूना हो यो । बर्षा लागेपछि पौडी पोखरी बन्छ विराटनगर , हिउँद लागेपछि धुलो र धुँवाको कहाली मडारिने शहर हो विराटनगर ।
अहिले प्रदेश एकको राजधानी पनि बनेपछि विराटनगरले आफ्नो शाख र शान जोगाउन पनि धेरै गर्नु पर्ने थियो तर पारा उही , शैली उही र ढर्रा पनि उही । धेरै अर्थमा अग्रणी परिचय बोकेको विराटनगरसंग अहिले पुराना परिचयहरु पनि मेटिदै जाँदा नयाँ थपिएका आवरणहरुमा विराटनगरवासीले नै गर्व गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि अहिले विराटनगरमा थपिएको सिटी रिक्सा आतंकले समग्र विराटनगर शहरको परिचयलाई नै थप धुमिल्याएको छ ।
न लाइसेन्स चाहियो कुदाउँनलाई नत कुनै अध्ययन नै । सिटी रिक्सा चलाउने हातहरुसंग न अभ्यास छ नत संस्कार नै । जथाभावी कुँदाउन पाइने , ट्राफिक नियमको पनि पालना र सम्मान गर्न नपर्ने कारणले पनि भद्रगोल बनेको विराटनगर यतिखेर । कुनै बेला रिक्साको राजधानी भनेर चिनिने विराटनगर प्रदेश नं. १ को राजधानी त बनेको छ नै बिस्तारै सिटी रिक्साको पनि राजधानी बन्दै गएको छ ।
विराटनगरमा करिब ८ हजार सिटी रिक्साहरु कुद्ने गरेका छन् जस्मा विराटनगर महानगरपालिकाले भने १ हजार ८ सय ५० वटा मात्र सिटी रिक्साहरुलाई अनुमति दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सिफारिश गरेको थियो । तर यातायात व्यवस्था कार्यालयले ३ हजार ८ सय ५० वटा सिटी रिक्साहरुलाई संचालन अनुमति दिएको छ ।
बाँकी सिटी रिक्साहरु छिमेकी गाँउपालिका र नगरपालिकाबाट आएर विराटनगरमा संचालन भईरहेका छन् । अत्यधिक सिटी रिक्साहरु संचालन भएपछि राम्रै आम्दानीको लोभमा सिटी रिक्सा किनेर संचालन गर्नेहरु पनि थपिएकै छ । सरकारी र सरोकारवाला निकायहरुको निर्लज्जतालाई टेकेर भित्रिएको सिटी रिक्साले विराटनगरमा देखाएको ताण्डवले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाउदै गर्दा यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको छ ।